आखिर कहिले रोकिएला सर्लाहीमा नदी उत्खनन्
कमलामाई खबर सम्वाददाता प्रकाशित: २०७७-९-२६ गते ८५८ पटक हेरिएको
सर्लाहीमा धुलो उडाउदै ,पानी चुहाउदै हिडने टिपरका कारण सर्बसाधारण मारमा परेका छन् । लखनदेही चादी खोलामा गिट्टी बालुवा उत्खनन्को ठेक्का पाएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीको मनोमानी बढेको स्थानीयले बताएका छन् । खोलामा अत्याधिक गहिरो खाल्डो बनाएर नदीमा उत्खनन् गरेर तिब्र गतीमा टिपर कुदाउँदा धुलो उडाउने र बाटो भत्काउदै हिड्ने गरेकाले पैदल यात्रु मारमा परेका छन् ।
खोलामा गहिरो खाल्डो पारेर उत्खनन् गरेपछि त्यहाँबाट निस्केको पानी चुहाउदै र धुलो उडाउदै बाटो भत्काउने गरेको स्थानिय राकेश मण्डलले बताउनु भयो । एकथान मेशिन लगाएर खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकाल्नु पर्नेमा सो कन्ट्रक्सनले ४÷५ वटा मेशिन लगाएर उत्खनन् तिब्र पारेको छ ।
लखानदेही खोला उत्खनन् गर्न ठेक्का पाएको गजुरमुखीले २ मिटर गहिराइ र १० मिटर चौडाइ उत्खनन् गर्नुपर्नेमा सो कन्ट्रक्सनले मनोमानी रुपमा खोलाको गहिराई बनाएका कारण स्थानीय बालबालिका खाल्डोमा डुबेर ज्यान जाने सम्भावना रहेको लालबन्दी नगरपालिका ११ का वडा अध्यक्ष दिपक लामाले बताउनु भयो । गजुरमुखीले बनाएको खाल्डोमा स्थानीयको घर पालुवा जनावर समेत डुबेर मर्ने खतरा बढदै गएको भन्दै स्थानीयले सो कामको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गजुरमुखीले हरेक टिपरको रसिद काटनुपर्नेमा त्यसो नगरेका कारण समेत उसले सो स्थानबाट कती मात्रामा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्नुपर्ने हो त्यसको एकिन समेत हुने अवस्था नरहेको वडा अध्यक्ष लामाले बताउनु भयो । रसिद नकाटेका कारण उसले सो स्थानबाट ठेक्का पाएको भन्दा पाँच गुणा बढी गिट्टी बालुवा निकालेर लगि रहेको पाईएको छ । सो स्थानको उत्खनन्को अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीकै मिलेमतोमा गजुरमुखीले मनोमानी रुपमा खोला उत्खनन् गरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानियको चर्को विरोधका बावजुद पनि लखन्देही खोलामा ठेकेदार कम्पनीले दादागिरी शैलीमा नदी उत्खनन् गरिरहेको हो । लालबन्दी नगरपालिका १२ डाब्कालीटोल र ११ हीरापुरघाटस्थित लखन्देही खोलाबाट अवैध रुपमा नदी उत्खनन् भएको स्थानिय लक्ष्मण खड्काले बताउनु भयो ।
क्रसर उद्योगहरुले अवैध रुपमा वन क्षेत्रमै नदी दोहन गरि रहँदा पनि सरोकारवाला निकाय स्थानिय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय सर्लाही र स्थानिय प्रहरी प्रशासन मौन देखिएका छन् । लालबन्दी नगरपालिका ११ र १ नम्बर वडाको हीरापुर र स्याङतान नाकामा अत्यन्त गहिरो खाडल बनाएर गिट्टी बालुवा निकालेको भन्दै स्थानिय दुई दर्जन युवाहरूको समुहले केही दिन पहिला खोलामै पुगेर नदी दोहनमा अवरोध समेत गरेका थिए । भने डाब्कालीटोल र हीरापुर नाकामा गुण्डागर्दी शैलीमा गजुरमुखीले नदी दोहन गरिरहेको लालबन्दी नगरपालिका ११ का स्थानीय रामएकवाल महतोले बताउनु भयो ।
त्यस्तै यस नाकामा खनिएका १५ देखि २० फिट गहिरो खाडल ठेकेदारले पुरेका छन् । हामीले पटक पटक वडाध्यक्ष दिपक लामा लगायत सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि हारगुहार गर्दापनि सुनुवाइ भएको छैन,’ महतोले गुनासो गर्नु भयो ।
‘ठेकेदार कम्पनीले मापदण्ड विपरीत ब्यापक रुपमा गिट्टी बालुवा निकालिरहेको छ । ‘१५ फिटभन्दा गहिरो नहर जस्तो लामो खाडल खनिएको छ, यसरी खाडल बनाएर गिटी बालुवा निकाल्दा भोलिका दिनमा बाढी आउँदा लालबन्दी १ को पलार गाउँ बढी जोखिममा पर्छ,’ लाललबन्दी नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष पञ्चमान स्याङ्वोले बताउनु भयो ।
‘मैले यस विषयमा पटक पटक नगर प्रमुख मानबहादुर खड्कालाइ राख्दै आएको छु, तर उहाँले वास्ता गर्नुभएन, यस्तै ताल हो भने उत्खनन्मा रोक लगाउनुको विकल्प छैन।’ उहाँको भनाई छ । ठेकेदार कम्पनी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधी समेतको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन् भइरहेको स्थानियको आरोप छ ।
“गट्टी बालुवा निकालेको ठाउँमा गहिरो डरलाग्दो खाडल बनेको छ । नगरपालिकाले गत असोजमा ठेक्का आह्वान गरेर खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकासा गर्न अनुमति दिएको थियो। खोला उत्खनन् अनुमति पाएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले अवैध ढंगले नदीजन्य पदार्थ निकालेको हो । ” लालबन्दी नगरपालिका ११ का वडाध्यक्ष लामाले भने ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि भनेर गहिरो खाडल खनेर बस्ती नै विनाश हुनेगरी नदी उत्खनन् गर्न नहुने स्थानिय बासीकोे भनाई छ । गजुरमुखीले पुर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि उक्त स्थानबाट गिट्टीबालुवा निकाल्न ठेक्का सकारेको थियो। ठेक्का सम्झौता तथा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त स्थानबाट ६ सय मिटर लम्बाइ, ७५ मिटर चौडाइ र १.५ मिटर गहिराइको खाडल खनेर उत्खनन् गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले खनेको खाडल १२ देखि १५ फिटभन्दा गहिरो छ। २ सय मिटर लामो उत्तर–दक्षिण फैलिएको खाडलको चौडाइ भने ४० फिट बराबर रहेको छ ।
नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार हीरापुर अन्तर्गत लखन्देही खोलाबाट १० हजार घनमिटर गिटीबालुवा निकाल्न सकिने उल्लेख छ । नगरपालिकाले लखन्देही खोलाकै वडा नं. ११ र १२ को स्याङतान नाकाबाट २१ हजार घनमिटर बालुवा एवम् ग्राभेल तथा वडा नं. १० र १२ को डब्काली टोल नाकाबाट १ लाख ३५ हजार घनमिटर बालुवा एवम ग्राभेल निकाल्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। डाब्काली टोलस्थित खोलामा ९ सय मिटर लामो तथा सय मिटर चौडाइमा १.५ मिटर गहिराइ सम्मको गिटी बालुवा निकाल्न मिल्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययनमा उल्लेख छ।
“नगरपालिकाले हीरापुर नाका अन्तर्गतको ठेक्का गजुरमुखीले रु २० लाख ५ हजारमा सकारेको” लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ पोखरेलले बताउनु भयो । सोही स्थानमा ठेकेदार कम्पनीले केही दिनदेखि अवैध उत्खनन् गरिरहेको छ । लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर ११, १२ र वडा नम्बर १०, ११ स्थित दुई स्थानमा पनि यही कम्पनीले उत्खनन् गरिरहेको छ।
“मापदण्ड अनुसार उत्खनन् नभएको पाइए कानूनी बमोजिम कारबाही गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलको भनाई छ । तर प्रभावकारी अनुगमन नभएको पोखरेलले स्वीकार गर्नू भयो । ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन् गरेपछि निरीक्षण गर्नु पर्ने नगरपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयबासीबाट आएको गुनासोमा कुनै चासो नदेखाउनुमा उनीहरूको समेत मिलेमतोको आशंका रहेको स्थानीयको भनाई छ । तर ठेकेदार कम्पनीले आफुहरुले सम्झौता र मापदण्ड विपरित उत्खनन् नगरेको दावी गरेको छ ।
यता,जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले भने आफुहरुले स्थलगत निरिक्षण गर्ने बताउनु भएको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसुरेन्द्र पौडेल,जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक सन्तोष सिंह राठौर त्यहि बाटो भएर हरेक शनिबार लालबन्दी नगरपालिका १४ को नारायण खोला तर्फ जाने गरेका भएपनि उक्त स्थानमा उहाँहरुको नजर नपुगेको पाइएको हो । आफुहरुले स्थलगत अनुगमन गरि आवश्यकता अनुसार कार्बाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी सर्लाही–महोत्तरीको सिमा क्षेत्रमा वन क्षेत्रमै अवैध उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । बाँके नदीमा उत्खनन्को ठेक्का पाएको क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा वन क्षेत्रमै उत्खनन् गरेको भेटिएको हो ।
तर गैर कानुनी रुपमा वन क्षेत्र ठेक्का र उत्खनन् गरिएपछि स्थानीय देखि वन परियोजनाका कर्मचारी समेत विरोधमा उत्रिएका छन् । वन क्षेत्रमा नियम मिचेर ईश्वरपुर नगरपालिकाले नदी उत्खनन्को ठेक्का लगाएको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्यले बताउनु भयो ।
परियोजना क्षेत्रमा उत्खनन्को ठेक्का लगाउँदा नगरपालिकाले कुनै परामर्श र सहकार्य नगरेको उहाँको भनाइ छ । ईश्वरपुर नगरपालिकाकी उप प्रमुख एकावतीदेवी चौधरीले नियमअनुसार नै उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाइएको बताउनु भयो । जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीले दिएको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार ठेक्का लगाएर उत्खनन्को सम्झौता भएको उहाँको भनाइ छ । यता,सरोकारवाला निकायहरुको स्थानियबासीहरुले विरोध समेतगरि रहेका छन् ।